तपाईंको ब्लग वा वेबसाइटको लागि राम्रो समाचार वेब विजेटहरू
यो प्रतिलिपि र पेस्टिङ कोडको रूपमा पृष्ठमा सजिलो छ
त्यसैले तपाईले तपाईको समाचार ब्लग पाउनुभयो वा वेबसाइट माथि र दौडिनु भएको छ तर तपाईले यसलाई बिर्सन चाहानुहुन्छ। वेब विजेटले मात्र गर्न सक्दछ।
वेब विजेट के हो?
वेब विजेटहरू कोडका साना टुक्राहरू हुन् जुन तपाइँ आफ्नो वेबसाइट, ब्लग वा सामाजिक सञ्जाल साइटमा प्रतिलिपि र पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ हजारौँ विगेटहरू निःशुल्क अनलाइनको लागि उपलब्ध छन्, प्रायः हरेक विषयमा फोकस गर्न फोकस गर्न सकिन्छ।
मैले किन वेब विजेट प्रयोग गर्नुपर्छ?
वेबविजेटले सामग्री सिर्जना गर्ने सामग्री प्रदान गरेर तपाईंको वेबसाइट वा ब्लगको रुचि थप्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको ब्लगले स्थानीय राजनीतिमा फोकस गर्छ भने, तपाईं एक विजेट थप्न सक्नुहुन्छ जुन राज्य वा राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित हुन्छ। यदि तपाइँ हाई स्कूल खेलकुदहरू लुकाउनु हुन्छ भने, तपाइँ समर्थक टोलीहरू पछ्याउने विजेट थप्न सक्नुहुन्छ। विगेट्सले विद्यार्थी वा नागरिक पत्रकारलाई ढाक्नका लागि कठिनाई हुने सामग्रीको प्रकार प्रदान गर्न सक्छ।
म वेब विजेट कसरी प्रयोग गर्छु?
तपाईले वेब विजेटहरू प्रयोग गर्नका लागि विस्तृत निर्देशनहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, तर सामान्यतया, यो केवल सरल छ र तपाईंको वेबसाइट वा ब्लगमा कोडको बिट कोड टाँस्दै छ। र जब त्यहाँ छनौट गर्न सैकड़ों तयार-निर्मित समाचार विगेटहरू छन्, तपाईले तपाइँको साइटको दृश्य फिट गर्न विजेटहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ वा आफ्नै आफ्नै पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
तल साइटहरु को एक सूची हो जहाँ तपाईं समाचार विगेट्स पा सकते हो। त्यहाँ त्यहाँ धेरै बढि छन्, त्यसैले तपाईंलाई चाहिन्छ के खोज्न डर नदिनुहोस्।
सीबीएस समाचार - नेटवर्कले धेरै कोटिहरूमा विजेटहरू प्रदान गर्दछ।
एसोसिएटेड प्रेस - अमेरिकी तार सेवाबाट एक विजेट।
न्यूयर्क टाइम्स - अखबारबाट समाचार ब्रेक गर्दै।
सीएनएन - केबल सञ्जालबाट समाचार।
फक्स समाचार - केबल सञ्जालबाट ब्रेकिंग समाचार।
संयुक्त राज्य अमरीका आज - अखबारबाट विविध विजेताहरू।
संयुक्त राज्य अमेरिका आज राजनीति
सीएनएन राजनीतिक टिकर
Politico Live Pulse - राजनीति वेबसाइटबाट समाचार।
व्यापार र आर्थिक समाचार
सीएनएन मनी - व्यवसाय र वित्तीय जानकारी।
वाल सेन्ट जर्नल
संयुक्त राज्य अमेरिका आज खेलकुद
तपाईंको आफ्नै बनाउनुहोस्
त्यहाँ विजेट साइटहरू छन् जुन विभिन्न किसिमका दर्जनौं बिगेटहरू होस्ट गर्दछ। तपाईं पूर्व-निर्मित विजेटहरू छान्नुहोस् र पनि आफैले सिर्जना गर्न र अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ।
विजेटबक्स - स्याण्ड बिगेटहरूको यस साइटको संग्रहबाट खोजी गर्नुहोस्, वा आफ्नै बनाउनुहोस्।
गुगल - खोज इञ्जिनले विभिन्न कोटिहरूमा दर्जनौं विजेटहरू प्रदान गर्दछ।
Wordpress - Wordpress ब्लगहरू भएकाहरूको लागि विजेटहरू।
मलाई फेसबुक र ट्विटरमा पछ्याउनुहोस्
2000 को शीर्ष 10 समाचार कथाहरु
साक्षात्कार गर्ने को लागी बेटर छ - नोटबुक्स वा रेकर्डर?
स्टोरीज जे कोले: ए जीवनी
The (Pre) क्लोविस को इतिहास - अमेरिका को प्रारंभिक शिकार समूह
के मुसलमानले पछिल्ला समयमा मिस गरिएका प्रार्थनाहरू प्रदर्शन गर्न सक्दछ?
एडवर्ड टेलर र हाइड्रोजन बम
घुमाउने बेला बटुवाहरूको लागि हेर्नुहोस्
कसरी साल्ट मेल खायो
रसायन विज्ञान मा प्रायोगिक त्रुटि को गणना कसरि गर्नुहोस
डेल्फी डीबीग्रिडमा मल्टीस्लेच कसरी गर्ने?
मसीही किशोरहरूको लागि शीर्ष परीक्षा अध्ययन युक्तिहरू
टेबल नमल्ट आणविक सूत्र - सोडियम क्लोराइड
Seleucids र उनको राजवंश
9 अजीब बिलबोर्ड
वर्षा: यसको कारणहरू, अवस्थाहरू र समस्याहरू
पशु अधिकार उद्धरण
डच! ... र अन्य ठिक जर्मन शब्दहरू
Logomisia (शब्द अववर्धन) के हो?
अदालतमा रिपोर्ट गर्दै
केाना इतिहास - सही जंक फूडको मानव घराना
अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डबाट शीर्ष 80 'संगीत कलाकारहरू
अल्बर्ट आइंस्टीन: जनरल रिटरेटिटिटी को पिता